Kate Winslet dia miresaka momba ny biopic Steve Jobs | Avy amin'ny mac aho
Kate Winslet dia miresaka momba ny biopic Steve Jobs
Mbola manohy mahalala data momba izay mety ho biopika manaraka ny maty izahay Steve Jobs. Raha fantatra bebe kokoa ny angona dia tsapanay fa mety hanakaiky ny fomba nitrangan'izany ny fialamboly marina ny zava-misy fa amin'ity tranga ity dia miorina.
Andro vitsy lasa izay dia hitantsika ihany ny tranofiara ofisialin'ny horonantsary izay havoaka amin'ny XNUMX Oktobra ary amin'izany Kate Winslet dia milalao ny anjara asan'i Joanna Hoffman, iray amin'ireo mpitantana manan-danja ho an'ny Bitten Apple Company.
Toa ny sary an-tsary an'ity sarimihetsika vaovao momba ny fiainan'i Steve asa ity, indrindra indrindra momba ny fotoana telo lehibe amin'ny fiainany, mifandraika amin'ny asany. Ny ampahany voalohany amin'ny sarimihetsika dia mifantoka amin'ny fandefasana ny Macintosh, fotoana fohy izay Manararaotra mametraka ireo mpanorina azy, Steve Jobs, ireo tompon'andraikitra Apple.
Ny tapany faharoa amin'ilay horonantsary dia miresaka momba ny lohahevitra tsy naseho mihitsy ary ny fandalovan'i Steve Jobs avy amin'ny orinasa NeXT, izay nolavina tamin'ny stardom tao anatin'ny taona vitsivitsy avy amin'ilay nahita fahitana. Ary farany, ny zavakanto fahatelo amin'ny sarimihetsika dia mifantoka amin'ny fotoana hiverenan'i Steve Jobs any Apple ary ny iMac voalohany dia natomboka, ny malalantsika iMac G3.
Araka ny hitanao dia misy fotoana telo tena tsy mitovy. ny voalohany dia tamin'ny 1984, ny faharoa tamin'ny 1988 ary folo taona taty aoriana, izay naharitra ela vao nanaiky an'i Steve Jobs ho eo amin'ny orinasa, manaraka ity ny tapany fahatelo. Kate Winslet dia miteny amin'ny fiderana ny tifitra iray manontolo momba ny maha-sarotra ny anjara asan'ny mpilalao Steve Jobs, nolalaovin'ny sakaizany Michael Fassbender satria misy fotoana tsy maintsy miteny mihoatra ny iraika ambin'ny folo minitra amin'ny fotoana iray izy.
Toa tsy misy na inona na inona ary tsy latsaky ny pejy 182 ny lahatsoratr'ity mpilalao ity izay tsy maintsy nianarana am-po satria izy no foiben'ny sarimihetsika. Araka ny nolazain'i Winslet, dia toy ny fiomanana hilalao toetra Shakespearean mahazatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Kate Winslet dia miresaka momba ny biopic Steve Jobs
Vonona ny hanokatra ny varavarany ny Apple Store in Queens amin'ny asabotsy izao
Ahoana ny fomba hijerena rohy ao Safari amin'ny paompy rantsan-telo